Home » My Dear Diary » အဆင်မပြေသေးလို့ပါ……
ဂျန်န၀ါရီ နောလစ်... အဆင်မပြေသေးလို့ပါ......
ကိုယ့်ရင်သွေးကို အင်မတန်လိုချင်မိပါတယ်… အရီးရယ်… သို့သော် မွေးမှု တခုထဲ မဟုတ်ဘူးဗျ… ကျွန်တော့်လို ပင်ပင်ပန်းပန်း မကြီးပြင်းစေချင်တော့ အကုန် လိုက်ချိန်နေရတာပါ… ပြီးတော့ လစာက နည်းနည်းလေး ပိုရင် မပြောဘူး.. ခုက မပိုတော့ အမေနဲ့ ကလေး ဘာကိုရွေး အခြေအနေဖြစ်လာရင် ကျွန်တော်ပဲ ရူးမှာ… ဘယ်သူ့မှ လက်မလွှတ်ချင်ဗျာ… လာအားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ… ခုတော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီ… ကလေးယူမယ်လို့…
.ကိုရေမြင်း။ ခလေးက သူ့အထုပ်နဲ့ သူလာတာ။ သူ့ဟာသူ အဆင်ပြေသွားတာ။ သတ္တိရှိရှိ ခလေးယူလိုက်၊ စီးပွားတက်လာလိမ့်မယ်။
ဟုတ်… အန်တီပြုံး မြှောက်ပေးလို့ ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဗျာ… ကျေးဇူးပါ… အမွှာပူး တကယ်မွေးဖြစ်ရင် အန်တီပြုံးကို တယောက်လာထိန်းခိုင်းမယ်… ဘာလို့ ဆိုတော့ ကလေးတွေက အဖေတူသားတွေဆိုတော့ မျောက်ရှုံးလောက်တယ်…
လူတွေနေတဲ့ဤဒွန္ဒယာကြီးမှာ.. လူသားကလေးမွေးဖို့.. မိဘတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်.. အကြီးအကျယ်ချို့ယွင်းနေတဲ့… နေရာဒေသဖြစ်လိမ့်မှာပေါ့..။
ကျုပ်​က​တော့ အဆင်​မ​ပြေ​သေးလို့ အိမ်​​ထောင်​ကိုမကျရ​သေးဘူး မ​နေစ​ကောင်းဘူးဆိုရင်​ သူဂျီး စမူဆာ​ပေးပြီး အ​မေ ဒီးကားကို​ခေါ်ပါ့လားဟင်​
အမ်​မ​ရေး သူဂ အ​မေဒီးကား ဂို လမ်း​ရှောက်​လာရမယ်​​ပေါ့ အဆင်​မ​ပြေပါဘူးဆိုမှ ဖိနပ်​ဖိုးကုန်​​အောင်​လုပ်​ချလိုက်​ပျံဘီ
ဟုတ်တယ်.. အဘနီရေ… တဂျီး ဒီးကားကို ခေါ်ရင်တော့ အဆင်ပြေမလား မသိနော်…
တဂျီးရယ်… ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ပဲ တွေးရတော့မယ်… ကိုယ်တိုင်က အတိတ်ကံ နည်းခဲ့တော့… ဒီလိုဖြစ်ရတယ်ပဲ ဖြေတွေးနေတော့တယ်… မဟုတ်ရင် စိတ်က တင်းကြပ်ပြီး တအားမွန်းလာလို့… ခုတော့ ကျွန်တော် အားတင်းပြီး ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ… မလောက်လဲ ညဘက် ဆိုက်ကားထပ်နင်းတော့မယ်…
မဖြစ်ရင်တော့ တကယ်နင်းမှာ မရှက်ပါဘူး…
ဒါများ အလွယ်​​လေး သူများ​တွေလို ​ယောက်​ခမအိမ်​ ကပ်​​နေ​ပေါ့။ က​လေးနှစ်​​ယောက်​လည်း ​ယောက်​ခမ​တွေ တာဝန်​ယူထားတယ်​။
အဲလိုတော့လဲ မဖြစ်ဘူး.. အန်တီမှီရဲ့… အမေက ကျွန်တော်မရှိလို့ မဖြစ်ဘူး… မနက်ပိုင်း အင်ဆူလင်ထိုးဖို့ ဆေးစုပ်တာ.. မနက်စာ ကျွေးတာ… ဆေးထည့်ပေးတာ… အကုန်က ကျွန်တော်လုပ်မှ ရတာ… ယောက်ခမ လဲ ဒုက္ခမပေးချင်ပါဘူး… သူ့မှာလဲ ကလေးက ၅ ယောက်တောင်…
ဆရာကြီး ပီမိုးနင်း ရေးတဲ့ စာတစ်ပိုဒ် သတိရတယ်ဗျ…
သိပ် စဉ်းစားလွန်းရင်… နောက်ကျပြီး..နောင်တ ရမှာစိုးလို့…. ဆရာပီမိုးနင်းက ပြောတာ…
အလက်​ဆင်းဒါးရယ်​ နီဂ​ဖွေး​ဖေ်ွးဂိုမရလို့မို့လား ယူချင်​ရင်​​ဒေါ့ ​ဖွေး​ဖွေးနဲ့ တစ်​ခုခုတူတာ​တွေ့ရင်​ ယူပလိုက်​​ဒေါ့ နာရိုဖစ်​​နေမစိုးလို့ ​ပေါဒါ
ယူမှာဆက်ဆက်ရေ.. ယူမှာ စိတ်မပူနဲ့တော့… အားရှိသွားပြီ ဆက်ဆက်ရဲ့…
ကျေးကျေးပါ… ဇီဇီ… အခုတော့ ကိုယ့်ဘွကိုယ် သိပေမယ့် နဂိုကထဲကလဲ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ် ယူဖြစ်မယ်ဆိုတာ.. စိတ်ထဲ မပြတ်တာနဲ့ ပို့စ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ထဲ ဖီးလ်ဖြစ်လို့ တင်လိုက်တာ.. အခုတော့ အားပေးသူများတာနဲ့ ယူတော့မယ်… ဟီး…
.ကျုပ်သဘောကတော့ ခြစ်ခြုပ်ပြီး ငွေစုတော့…ငွေအမောင့်တစ်ခုကို လစဉ်ဇွတ်ဖယ်ထား
ဟုတ်.. ဦးMike ကျွန်တော် ဒီတခါ ဘောနပ်ထုတ်ရင် ကလေးအတွက် သီးသန့် ဖယ်ထားလိုက်တော့မယ်… ကလေးလဲ ယူပါတော့မယ် ခင်ဗျား…
ဟုတ်ကဲ့ပါ.. ခင်သုတရေ.. လာရောက်အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ… စိတ်ချပါ.. ဒီတနှစ် ယူပါပြီဗျာ…
.အခုမှ သတိရတယ်။ ရွာထဲမှာ အလက်ဇင်းရယ်၊ အဘနီရယ်၊ အန်ကယ်ကြောင်ရယ်ကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချနိုင်တဲ့လူ မပေါ်သေးဘူး။ အဲဒါကို ရွာ့အပူတပြင်းကိစ္စလို့ သတ်မှတ်ပြီး လုပ်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ် ။ အထူးသဖြင့် အန်ကယ်ကြောင်ကိုပေါ့။
ဟုတ်ပါ့.. အန်တီပြုံးရေ…. ဒါကို ကော်မတီဖွဲ့ပြီး ဖြေရှင်းရမယ်နော့…
ရိုးရိုးလေးဘဲတွေးကြည့် မိဘအရွယ် အသက် ၃၀ မှာ ကလေးရရင် ထိုကလေးဘွဲ့ရပြီးတဲ့ နောင်အနှစ်၂၀ မှာအလုပ်ထဲဝင်ရောင်ချိန် ( မြန်မာပြည်ကျောင်းပညာရေးစနစ်အရ ၁၅နှစ်ခန့်ဆယ်တန်းအောင် ဘွဲ့လေးနှစ် ပေါင်း ၂၀နှစ်ခန့်) မိဘက အသက် ၅၀ ဖြစ်ပြီး ဒါဆို ယေဘူယျအားဖြင့် မိဘလည်း အလုပ်လုပ်နေအရွယ်လောက်ဘဲရှိသေး၊ မိဘအသက် ၄၀ မှာကလေးယူရင် ထိုကလေး ဘွဲ့ရပြီး မိဘက ပင်စင်ယူ အသက် ၆၀ ပြည့်လေပြီ အလုပ်စခါစမှာဘဲ မိဘ၀န်ကို ထိုကလေးထမ်းရနိုင်ဖွယ်ဆိုတော့ ဒီထက်နောက်ကျသောအရွယ်မှ ယူရင်တော့ ပူပင်ရမှုတွေ ပိုနိုင်ဖွယ်ပါဘဲ၊
မြန်မာပြည်မယ်… သက်ကြီးရွယ်အိုတွေအတွက်.. လက်ပူတိုက်စနစ်နဲ့ဘိုးဘွားရိပ်သာလုပ်.. သားသမီးတွေကိုမှီခိုရတဲ့.. ဘ၀ပုံစံဖေါ်… အရှေ့တိုင်း..အရှေ့တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုပြီး.. သားသမီးက အိုမင်းမစွမ်းမိဘပြန်ကြည့်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဓလေ့ကို.. အတင်းကာရောထိုးသွင်းပြီး.. လုပ်နေတာတွေရပ်…
သားသမီးထံက ပြန်ကြည့်ဖို့ထက် ကိုယ့်ဇနီးမောင်နှံအလုပ်ဝင်ငွေနဲ့ရပ်တည်နေနိုင်ချိန် သားသမီးက အလုပ်လုပ် ၀င်ငွေရနေပြီမို့ သူ့နောင်ရေးစိတ်အေးဖွယ် အရွယ်ကာလနမူနာတွက်ပြတာပါ။ ကိုယ့်ဇနီးမောင်နှံ ပင်စင်ယူအလုပ်ဝင်ငွေမရှိမှ သားသမီးအလုပ်စလုပ် အဆင်မပြေရင် ကိုယ်က ထောက်ပံနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုကောင်းရဲ့ အဲလိုမဟုတ်ရင် မိဘတွေပူပင်သောကဖိစီး မှာကိုပြောတာသဂျီးရေ။ မိဘအများစုက သားသမီးဆီကပြန်ရလိုမှုနဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်ကြတာမျိုးတော့ မဟုတ်တန်ဘူးကွယ်။
ဟုတ် သဂျီး နားလည်ပြီးသားပါ ဒါကြောင့်လဲ ခုချိန်ထိ ကျုပ်ရွာထဲမှာ ဆက်ရှိနေတာပေါ့ဗျာ။
အခုမှပဲ ကျွန်တော်ပို့စ်လေး ပိုပြည့်စုံသွားတယ်… ကျေးဇူး… တဂျီး နဲ့ ကိုခ..